Indlela kusimangaze kumyeni wakhe: ambalwa obusa ukuphila ubulili ephelele
Lapho lezi zimpi unamahloni romantic zibe nobuhlobo obungathi sina, zonke imfihlo azocaca. Ngokuvamile, ngesikhathi umshado, ikakhulukazi ngemva kokubeletha, ucansi kuba eliphuphile futhi okuyisidina. Bese umgcini kwemizi umndeni, ethukile iluma izindebe zakhe zokukhala ebabayo, ubuza umbuzo: "Indlela kusimangaze umyeni wakhe?".
Wonke umuntu wesifazane uyazi umuzwa uma uqaphela ukuthi uma othandweni ikhanda phezu izithende umfana eyeka ukunaka kwakho awuboni into entsha entsha e wezigqoko, izinwele umbala noma kwekhanda. Kulesi sigaba, okokuqala owesifazane ucela yena: "Indlela kusimangaze umyeni wakhe?". Kodwa ngokuvamile, agxile ezinkingeni zabo, yena masinyane akhohlwe ngomkakhe. Lokhu ngokuvamile kuholela ukucasuka, ukuxabana, ukuvela izakhiwo ngisho lapho kubhujiswa lesi eqinile, ezibonakala imishado. Nokho, uma ubheka isimo ngeso amadoda, konke lokhu iwela indawo.
Khumbula ukuthi kulahleke othandweni pool nekhanda lakhe, sasenza esibukweni amahora ngaphambi kosuku lokuqala, indlela ukuthenga imimoya kakhulu "okumnandi", begqoke kuphela lokho okujabulisa indoda amaphupho akho futhi kuphekwe ngendlela ayithandayo kuso. Ngokuhamba kwesikhathi, ukuba abe nesifiso sokujabulisa umuntu wanyamalala. Uyayeka vusa aphila ngayo ngokobulili, awuseyona ecabanga indlela kusimangaze umyeni wakhe. Kuwubuwula ukuphetha ngokuthi umyeni akusho ukuqaphela. Niyakhumbula lesi sisho, "Umuntu othanda emehlweni akhe?" Akunandaba ukuthi noma cha uzoba ibukeke intombazane umagazini zangasese. Into esemqoka - ukuze ubonise ukuthi udinga ezwe ukuthi unakekelwa ngesisa. Yomuntu ngokuqinisekile siyabazisa.
Ngokuvamile lo mbuzo, "indlela kusimangaze indoda embhedeni" Owesifazane uthola ukumangala. Bese, udidekile yena odlula ukuthola ikhambi ekahle.
Eqinisweni, indlela enjalo alikho: yilowo nalowo lihlukile. Kodwa kukhona izinto ezimbalwa namasu, indlela kusimangaze umyeni wakhe, owayevele ukulinganisa ngokunembile, ummeleli we-ubulili namandla:
Yiba Swagger ngaphezulu embhedeni. Ukuze uthathe isinyathelo, ukuthenga Lingerie babeqotho futhi amasokisi amade, akazange abe manqikanqika izenzakalo yakhe ekuthuthukiseni umdlalo, bese umbuzo "indlela kusimangaze umyeni wakhe" uzonyamalala ngokwalo.
Thola amandla okunqoba izakhiwo zabo. Khumbula ukuthi umuntu wakho uyakuthanda nje, kweqiniso, ngakho ingxoxo kwaphakade isisindo okweqile phezu okhalweni abakwazi kuphela yibe yinto exakayo, kodwa futhi ingavithiza abakhethiweyo.
Zama ukukhuluma ngobuhlobo wedwa. Umbuzo ka "indlela kusimangaze umyeni wakhe" akufanele ibekwe lutho. Ungesabi ukubuza mayelana izifiso abethandana naye.
Abesifazane bavame ukucabanga ukuthi ngokuphelele wonke amadoda bacabanga ngokufanayo. Kodwa empeleni akunjalo. lover yakho, wokuqala nomkhulu kunabo bonke - umuntu, futhi kuphela ke ungumyeni futhi ungubaba abathembekile.
Ngakho-ke, into esemqoka ukuthi umlingani ulindele ngesikhathi esilandelayo - lena inkulumo ngqo.
Futhi kungakhathaliseki ukuthi ayinangqondo ke kungase kuzwakale, kodwa umuntu, nabo bonke isithembu sakhe, kwakudingeka omunye wesifazane ongashadile. It nguye ukuthi kuyoba ngenxa yokuqonda kwakhe ukusekela kuyo.
Lapho ufunda ngokukhululekile, ngaphandle umkhawulo ukukhuluma "labo" izindikimba ukuxoxa ngokuphila siqu, kuphela embhedeni iza idyll ephelele, futhi ubulili kuzoletha nakho ezintsha nopende.
Indlela eqabula ulimi izifundo nabakhohlisi nabakhohlisi
Yini amadoda anjengo embhedeni: kwembula izimfihlo abafana
Ukungabi orgasm in abesilisa nabesifazane: izimbangela, ukwelashwa
Aphorisms futhi amazwi aphathelene umzali
Siza abazali futhi bathandazele indodana